Wasiiru Dawlaha Wasaarada Caafimaadka JDFI Oo Lagu Soo Dhaweeyay jigjiga, - Cakaara News
Wasiiru Dawlaha Wasaarada Caafimaadka JDFI Oo Lagu Soo Dhaweeyay jigjiga,
Jigjiga(cakaaranews), Arbaca, 24ka, August, 2016, Waxaa garoonka diyaaradaha ee garaad wiil waal international Airport si diiran loogu soo dhaweeyay wasiiru dawlaha wasaarada caafimaadka JDFI mudane Dr Amiir Amaan.
Waxaana wasiiru dawlaaha ku soo dhaweeyay garoonka diyaaraha masuuliyiinta ugu saraysa xafiiska caafimaadka DDSI oo uu ka mid yahay yahay wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI mudane Xasan Ismaaciil Cali . Soo dhawayn ka dib waxaa wasiiru dawlaha loo soo galbiyay caasimada deegaanka ee jigjiga.
Markii uu soo galay wasiiru dawluhu magaalada ayaa isaga iyo masuuliyiinta caafimaadka DDSI booqdeen Cusbitaalka Kaaraamardha ee magaalada jigjiga. wasiiru dawlaha caafimaadka JDFI Dr Amiir Amaar ayaa u kuurgalay geedi socodka adeegyada caafimaadka ee uu fudiyo cusbitaalka Kaaraamardha isaga oo ku soo wareegay dhamaanba waaxaha uu cusbitaalku ka kooban yahay sidoo kalena waraystay xaaladaha bukaanka jiifa cusbitaalka Kaaraamardha iyo sida ay u helaan adeegyada caafimaadka.
Ujeedada socdaalka wasiiru dawlaha ayaa ah in uu ka qaybgalo kulanwayanah 1aad ee daraasaadka iyo qiimaynta cudurada dayacan ee ka dhasha kulaylaha kaasi oo maal-mahanba ka socday caasimada DDSI siina socondoona maalmaha soo socda.